स्थानीय तह भ्रष्टाचारमा लिप्त, धेरै के-केमा हुन्छ भ्रष्टाचार ?	Postpati – News For All
स्थानीय तह भ्रष्टाचारमा लिप्त, धेरै के-केमा हुन्छ भ्रष्टाचार ?
पत्रपत्रिकाबाट २०७६ मंसिर १६,सोमबार प्रकाशित पढ्न लाग्ने समय : ४ मिनेट
मङ्सिर १६, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तह भ्रष्टाचारमा डुबेको ठहर गरेको छ ।
यो खबर अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेका छन् । अख्तियारमा यतिबेला स्थानीय तहमा भएका अनियमिततासम्बन्धी उजुरीको चाङ लागेको छ। योजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन, सेवा तथा खरिद, कर्मचारी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सेवा वितरण, सार्वजनिक जग्गा सिफारिस, शिक्षा व्यवस्थापन लगायतका उजुरीमा छानबिन गर्दा व्यापक भ्रष्टाचार पाइएको आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए।
वडाध्यक्षका अधिकार वडा सदस्यले प्रयोग गर्ने, प्रमुख÷अध्यक्षका अधिकार उपप्रमुख÷उपाध्यक्षले प्रयोग गर्ने र कार्यपालिकाको अधिकार अध्यक्ष वा प्रमुखले प्रयोग गरेको पाइएको छ। कानुन नबनाइ मौखिक आदेशका भरमा काम गरेकोसमेत भेटिएको छ। राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचका आधारमा योजना छनोट गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ। राजनीतिक प्रकृतिका संस्थामा बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ। विकास निर्माणको एउटै कामलाई दोहोरो देखाइ झुटा बिल–भर्पाइ एवं विवरण बनाएर भुक्तानी लिने गरेको पाइएको छ।
दोहोरो नहुने गरी योजना छनोट, कार्यान्वयन र खर्च प्रणाली व्यवस्थित हुनुपर्ने अख्तियारको सुझाव छ। स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजनामा उपभोक्ता समिति गठन गर्दा बहालवाला शिक्षक र जनप्रतिनिधिसमेत रहेको देखिएको छ। उपभोक्ता समिति र कर्मचारीको मिलेमतोमा योजना कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया पूरा नगरी पेश्की दिने गरेका तथा कामै नभई फछ्र्याैटसमेत गर्ने र काम नसकिँदै सम्पन्न प्रतिवेदन बनाइ भुक्तानी दिने, कमिसन लिएर अपूरा आयोजनाको फरफारक गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ।
सिलाइ÷बुनाइ, कम्प्युटर तालिम, फर्जी कागजात बनाइ कार्यक्रमको रकम भुक्तानी लिए÷दिएकोसमेत भेटिएको छ। स्थानीयको आधारभूत आवश्यकता र मागका आधारमा लक्षित कार्यक्रम छनोट नगरेको देखिएको छ। वातावरणीय अध्ययन नगरी सडकको ट्र्याक खोल्न बजेट दिइने गरेको छ।
अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन गरी स्थानीय तहको मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थ हिनामिना गरेको, मिलेमतोमा ठेक्का पार्ने तथा आफूअनुकूल पार्टीलाई ठेक्का दिएको उजुरी धेरै परेको अख्तियार प्रवक्ता कोइरालाले बताए।